माघ २ देखि काठमाडौंमा कहाँ-कहाँ गाडी गुडाउन पाइँदैन ? | CHALKHEL.COM
Home आर्थिक माघ २ देखि काठमाडौंमा कहाँ-कहाँ गाडी गुडाउन पाइँदैन ?
माघ २ देखि काठमाडौंमा कहाँ-कहाँ गाडी गुडाउन पाइँदैन ?
२६ पुस, काठमाडौं । काठमाडौंका मुख्य भित्री शहर (कोर सिटी एरिया) माघ २ गतेदेखि पांग्रे र त्योभन्दा ठूला सवारी प्रवेश निषेधको घोषणा गरिएको छ । कतिपय सडकहरुमा वान-वे सिस्टम लागू हुँदैछ ।
दुईपांग्रे सवारीलाई भने यो नियम लागू गरिएको छैन । नियम नमान्ने सवारी चालकलाई ५ सय देखि १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवना लगाउने ट्राफिक प्हरीले जनाएको छ ।अनलाइनखबर
Previous articleडिन शर्माले थप्लान् त म्याद ?
Next articleभूकम्पको दोस्रो किस्ता बुझ्ने म्याद नथपिने